musha Oceania Liam Hemsworth Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeAustralia muimbi anonyanya kuzikanwa nezita rezita rezita “Lili". Our Liam Hemsworth Childhood Story pamwe ne Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwehupenyu hwake. Kunyanya zvakadaro, mamwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvinyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva iye ari mumwe wevatarisiri vanotarisa vanotarisa mumhizha refirimu. Zvisinei, vashoma chete ndivo vanofunga nezveLiam Hemsworth's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Liam Hemsworth Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Liam Hemsworth akaberekwa musi we 13th waJanuary 1990 kuMelbourne, Australia. Akanga ari muduku pane vanakomana vatatu vakaberekerwa naamai vake Leonie van Os (Mudzidzisi weChirungu) uye kuna baba vake Craig Hemsworth (mutungamiri wenzanga-mazano).
Nezvemhuri yake, Liam inyika yeAustralia yemuchena rudzi rweChirungu, Irish, Scottish, uye Germany.
Young Liam akakurira muMelbourne, achipedza makore mashomanana ehuduku hwake kumusha wakapoteredza weBurman pamwe chete nevakoma vake Ruka naChris.
Ivo vanin'ina vacho vaiwanzo tamba nhabvu mitambo yaiona vakoma vaLiam vachitora chinzvimbo chevaIndia kana makororo, vachidzingirira hama yavo yemwana mudondo rese reBulman. Liam anozoyeuka kuti mitambo iyi yaive nebasa rekumutsa rudo rwake rwekusangana uye nyaya dzinonakidza.
Hemsworth pakupedzisira akagumisa kutama kubva kuMelbourne kuenda kuBulman uye kubva kuBulman kuenda kuMelbourne nekugara paPhillip Island apo Liam akange ave nemakore 8. Yaive pachitsuwa icho Liam yakawana zvishuwo zviviri zvitsva - kuita uye kusevha.
“Taigara tichikwikwidza nguva dzose, uye kutaura chokwadi, ndiyo sarudzo yakanakisa yehudiki. Taenda kumafuraidza tisati tapedza chikoro uye tapedza ”.
Anonyora Liam wezvaanoda panguva iyoyo.
Liam Hemsworth Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Liam akaenda kuNewhaven College kuPhilip Island. Ndichiri kuchikoro iyo skrini prodigy yaive nhengo yeboka remitambo yaipinda mumitambo kusvika apedza kudzidza. Paakapedza kudzidza, Liam akadzidza kuisa pasi kubva kuna mukoma wake Ruka. Iye mudiki, zvakadaro, akasiya basa rake rekutanga rekuisa pasi pasi mushure mekufunga kuti aigona kuita zvakanaka semutambi.
Akazoenda kunhoroondo yake yekutanga pazera re16 ndokutanga basa rake mu2007 nekutamba zvidiki zvidiki mumitambo yeAustralia senge "Kumba nekure" pamwe ne "Vanasikana vaMcLeod".
Liam yakaramba ichikosha mumhizha refirimu reAustralia nokuonekwa mune mamwe mahofisi nevana zvinoratidzira kusvikira asvika kuUnited States mu2009.
Liam Hemsworth Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Kukwira kwaLiam mukurumbira kwakagadziriswa nekutamisirwa kwake kuhurumende dzakabatana uko kwaakasarudzwa kuita chinzvimbo chekutungamira mumutambo we2010 'Rwiyo rwekupedzisira', achitamba rudo rwekuda kwemukadzi wake weramangwana (Miley Cyrus) hunhu mufirimu.
Imwe mafirimu ayo akanyora kubudirira kwekutengesa akaona Liam naMiley vakakunda muAustralian Kids Choice Award ye Best Kiss. Mukuwedzera, akatumidzwa zita reMutambo Unotevera weVatungamiri vevanhu neChirongwa cheMagazini.
Liam yakabatanidzwa mukubudirira kwake kukuru mugore rakatevera nekuisa basa rinotungamirira mu Hunger Games Trilogy.
Liam Hemsworth Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Liam murume akaroora. Tinokuunzira iwe hukuru hwehukama pamusoro pehukama hwake hwepakutanga kusanganisira kuti akasangana sei ndokuroora mudzimai wake Miley Cyrus.
Kutanga nehukama hwaLiam nemusikana wake wekuAustralia, Laura Griffin. Hwavo hwaive hukama hwaisakwanisa kumira muyedzo wedaro sezvo ivo vakaputsa nguva pfupi Liam atamira kuUS.
Tevere hwaive hukama hwake nemukadzi wake kuti ave, Miley Cyrus. Ivo vaviri vakasangana vachiri "kutora Rwiyo Rwekupedzisira".
Imwe mushure memwoyo weLiam yakatevera yakaita izvo zvinogona kurondedzerwa sechirudo chekuda naEiza González uye hukama hwekunamata naNina Dobrev.
Liam yemusi waEiza González (kuruboshwe) uye aive nehukama hwehukama naNina Dobrev.
2015 ndiyo gore iro Liam rakadzorera zvakare moto wakazara werudo naMirey Koreshi, kuonana zvakare kwakasimbiswa nehutano hutsva huchikwira muchikwata chakavanzika pa 23rd yaDecember 2018.
Liam Hemsworth Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Liam yakazvarwa mumhuri yevashanu. tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Nezve baba vaLiam: Craig Hemsworth ndiye baba vemutevedzeri uyo anowirirana zvakaenzana nevanakomana vake achiri muduku.
Kuwedzerwa kune iro ibasa rake semushandi webasa rezvemagariro avo pamwe chete nemukadzi wake, vakatanga mitemo yekudzivirira vana yavictoria.
Nezve Amai vaLiam: Leonie Hemsworth aive mudzidzisi weChirungu panguva yekuzvarwa kwaLiam. Chido chake mukushandisa dzidzo sechinhu chechokwadi chekuzivisa shanduko hachina miganhu sezvo iye achinzi akadzidzisa vana vake s3x dzidzo kumba.
Akashandawo nemurume wake kuAustralian Childhood Foundation, achipa chikamu chake kuchengetedza vana kubva pakushatiswa.
Nezve hama dzaLiam: Liam ine hama mbiri dzakakura dzinosanganisira Ruka naChris.
Luke Hemsworth ndiye wedangwe pavakoma uye anotanga kupinda mukuita. Chinozivikanwa pakati pechiono chake chemuvhenekeri ibasa rake rekutarisa se "Stubbs" mu "Westworld" pamwe nekuonekwa pasipo yeAussie "Vavakidzani".
Chris, kune rimwe divi, anozivikanwa nekuve mutambi mukuru muMarvel Comics firimu "Thor", ayo ega mapurojekiti uye crossovers nezve maAvenger.
Liam Hemsworth Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Untold Career Facts
Liam nemunin'ina wake Chris vakaferefeta "Thor" asi vagadziri vakasarudza iyo yekupedzisira kuti awedzere kutaridzika uye ruzivo.
Liam akakandwawo muSylvester Stallone 2010 bhaisikopo 'Izvo Zvinoshandiswa'. Nekudaro, hunhu hwake hwakatemwa kunze kwechinyorwa mushure mezvo Stallone akamubhadharira basa mune yegore ra2012 rakazotevera 'The Expendables 2'.
Liam Hemsworth Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Liam ine zvinyorwa zvinotevera uye zvinhu zvaidiwa kumunhu wake akadzikama.
Anonakidzwa nekurova bhegi.
Pane flip side, Liam haadi zvinhu zvose pane imwe nguva uye inogona kuva dzimwe nguva kusava nehanya.
Liam Hemsworth Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Lifestyle
Neine mumbure inokosha ye $ 16 Million, Liam yaimbova neimba iri muMalibu inodhura $ 6.8 mamiriyoni. Imba yacho yaibhadhara mari imwe neimwe yebhadharo ichifunga nezvekuti mukati mavo mune zvekunakidza yakanga yakaenzana nezvinhu zvinoshamisa zvekunze.
Zvinosuruvarisa, imba yacho yakaparadzwa panguva yeWoolsey Moto yakaparadza California muNovember 2018.
Zvave zvichishungurudza mazuva mashoma. Izvi ndizvo zvakasara zveimba yangu. Rudo. Vanhu vazhinji muMalibu uye munzvimbo dzakapoteredza muCalifornia vakarasikirwa nemisha yavo zvakare uye mwoyo wangu unobuda kune wese anenge achinjwa nemoto uyu.
Kubatsira: https://t.co/YQCE1cLaej & @happyhippiefdn pic.twitter.com/vtLFytFmNw
Taura nezvemota yaLiam, mutambi ane McLaren anoshamisa uye dzimwe nguva anoonekwa aine Chevy SUV.